ကနျြးမာသော ကလေးတဈယောကျကို မှေးဖှားဖို့ တဈပတျနဲ့ တဈပတျ ဘယျအစားအစာတှေ စားဖို့လိုအပျသလဲ? - Chit MayMay
Home Pregnancy Health ကနျြးမာသော ကလေးတဈယောကျကို မှေးဖှားဖို့ တဈပတျနဲ့ တဈပတျ ဘယျအစားအစာတှေ စားဖို့လိုအပျသလဲ?
ကနျြးမာသော ကလေးတဈယောကျကို မှေးဖှားဖို့ တဈပတျနဲ့ တဈပတျ ဘယျအစားအစာတှေ စားဖို့လိုအပျသလဲ?
ကိုယျဝနျဆောငျမိခငျတှဟော မိခငျနှငျ့သန်ဓသေားကနျြးမာဖို့အတှကျ အစားအစာ စားသုံးရာမှာ ရှေးခယျြမှုမှနျကနျဖို့ အရေးကွီးပါတယျ၊ ကိုယျဝနျဆောငျစဉျအတှငျးမှာ ခန်ဓာကိုယျရဲ့ လိုအပျခကျြတှကေ ပွောငျးလဲနတောကွောငျ့ ပရိုတိနျး၊ ဗီတာမငျနှငျ့ သတ်တုဓါတျတှေ အပိုဆောငျး ရရှိဖို့ လိုအပျပါတယျ။ မမှေးသေးတဲ့ ကလေးနှငျ့ မိခငျရဲ့ ကယျလိုရီလိုအပျခကျြကို ဖွညျ့ဆညျးဖို့ ကိုယျဝနျဆောငျ ဒုတိယနှငျ့ တတိယသုံးလတာ ကာလအတှငျးမှာ နစေ့ဉျနတေို့ငျး အပိုဆောငျးကယျလိုရီ ၃၀၀-၅၀၀လောကျ ခန်ဓာကိုယျက လိုအပျပါလိမျ့မယျ။ ကလေးမှေးပွီးနောကျနှငျ့ ကလေးကို နို့တိုကျနတေဲ့ ပထမလအနညျးငယျအတှငျးမှာ နစေ့ဉျ တူညီတဲ့ ကယျလိုရီအပို ပမာဏကို ရရှိဖို့ လိုအပျပါလိမျ့မယျ။
ဒါ့ကွောငျ့ ကိုယျဝနျဆောငျမမေတေို့အတှကျ ကိုယျဝနျဆောငျစဉျမှာ လိုအပျတဲ့ အာဟာရမြားစှာနှငျ့ကိုယျဝနျဆောငျမိခငျတှေ ပုံမှနျရကျသတ်တပတျအတှငျးမှာ စားသငျ့တဲ့ အစားအစာ စရငျးကို မြှဝပေေးလိုကျပါတယျ။
ကိုယျဝနျဆောငျရဲ့ အစောပိုငျးရကျသတ်တပတျ(၂ပတျ-၃ပတျ)အတှငျးမှာ စားသုံးတဲ့ အစားအစာမြားက သငျနှငျ့သငျ့ကလေးအတှကျ သီးသနျ့အာဟာရ အဖွဈ ဆောငျရှကျပေးပါလိမျ့မယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ လိုအပျတဲ့ အာဟာရ အားလုံးကို စားသုံးဖို့ အရေးကွီးပါတယျ။ ဖောလဈအကျဆဈကွှယျဝတဲ့ အစားအစာမြားက ကလေးရဲ့ အစောပိုငျးကြောရိုးဖှံ့ဖွိုးမှုအတှကျ ကူညီပေးတာကွောငျ့ ဒီအဆငျ့မှာ စားသုံးရမှာ ဖွဈပါတယျ။ မဂ်ဂနီဆီယမျကွှယျဝတဲ့ အစိမျးရောငျ အရှကျမြားကို စားခွငျးက ကိုယျဝနျဆောငျစဉျ ပြို့အနျတတျတာကို သကျသာစနေိုငျပါတယျ။
အစိမျးရောငျ အရှကျမြား၊ ဘရိုကိုလီ၊ ကွကျဥ၊ ပဲအမြိုးမြိုး။
၂။ ကိုယျဝနျ ၄ပတျမှ ၁၂ပတျ
ကိုယျဝနျဆောငျ ၆ပတျ ဝနျးကငျြလောကျမှာ ကလေးရဲ့ သှေးနီဆဲလျမြားက စတငျဖှဲ့စညျးလာပွီး နှလုံးသှေးလညျပတျမှု စတငျပါတယျ။ ဒီအဆငျ့မှာ ဖွဈစဉျကို ကူညီပေးဖို့ သံဓါတျကွှယျဝတဲ့ အစားအစာမြားကို စားသုံးသငျ့ပါတယျ။ non-vegetarian အစားအစာမြားမှာ တှရေ့တဲ့ သံဓါတျကို ခန်ဓာကိုယျက ပိုမိုလှယျကူစှာ စုပျယူပမေယျ့ သငျဟာ သကျသကျလှတျစားသူဖွဈလြှငျ ဗီတာမငျစီကွှယျဝတဲ့ လိမ်မျောဖြျောရညျကဲ့သို့ အသီးဖြျောရညျသောကျခွငျးဖွငျ့ သံဓါတျစုပျယူခွငျးရဲ့ ဖွဈစဉျကို အရှိနျမွှငျ့နိုငျပါတယျ။
နှားနို့၊ ကွကျဥ၊ အသား၊ ပငျလယျစာ
ပထမသုံးလတာပွီးသှားရငျ ကလေးရဲ့ ဦးနှောကျဟာ ခန်ဓာကိုယျရဲ့ တခွားအစိတျအပိုငျးမြားထကျ ပိုပွီးမွနျမွနျ စတငျဖှံ့ဖွိုးပါတယျ။ ဒီအဆငျ့မှာ အိုမီဂါ ၃ဖကျတီးအကျဆဈနှငျ့ DHA ကွှယျဝတဲ့ အစားအစာမြာကို စားသုံးပေးခွငျးဖွငျ့ လိုအပျတဲ့ အာဟာရမြားကို ထောကျပံ့ပေးရပါလိမျ့မယျ။
mackerel (ငါးကှမျးရှပျ)၊ sardines (ငါးသတ်ေတာငါး)၊ DHA သို့ EPA ပါဝငျတဲ့ ကိုယျဝနျဆောငျ ဗီတာမငျ ဖွညျ့စှကျစာမြား
၃။ ကိုယျဝနျ ၁၃ပတျမှ ၂၈ပတျ
ဒါဟာ ကလေးတဈယောကျအဖွဈ လြှငျမွနျစှာ ဖှံ့ဖွိုးသော အရေးပါတဲ့ အဆငျ့ဖွဈပါတယျ။ ဒီအခြိနျမှာ အာဟာရတှေ မြားစှာ လိုအပျပါတယျ။
မကျြလုံးအတှကျ DHA နှငျ့ ဘီတာကာရိုတိနျး
မုနျလာဥနီ၊ ကနျစှနျးဥ၊ ဟငျးနုနှယျ၊ မကျကရယျငါး၊ ဆာဒငျးငါး
နှားနို့၊ ဒိနျခဉျြ၊ တို့ဖူး၊ ခြိဈ၊ ငါးသတ်ေတာငါး
ကယျလျစီယမျ စုပျယူမှုကို ကူညီဖို့ ဗီတာမငျဒီ
ငါးသတ်ေတာငါး၊ ငါးသလောကျ၊ fortified milk
DNAရဲ့ လုပျဆောငျခွငျးနှငျ့ ပွငျဆငျခွငျး၊ ထုတျလုပျခွငျးအတှကျ ဇငျ့
အနီရောငျအသား၊ shellfish၊ ပဲ၊ အခှံမာသောအသီးမြား၊ အစအေ့ဆနျမြား၊ နို့ထှကျစားသောကျကုနျမြား
၄။ ကိုယျဝနျ ၂၉ပတျမှ ၄၀ပတျ
သငျ့ကိုယျဝနျရဲ့ နောကျဆုံးပတျကို စတငျခဉျြးနှငျးဝငျရောကျလာတာကွောငျ့ သငျ့အစားအသောကျထဲမှာ ထညျ့သှငျးစားသုံးရမယျ့ အစားအစာမြားစှာ ရှိပါတယျ။
သှေးခဲမှုကို ကူညီပေးဖို့ ဗီတာမငျ ကေ
ကိုကျလနျ၊ ဟငျးနုနှယျ၊ စိမျးစိမျးစိုစို ဆလတျရှကျမြား၊ Swiss chard၊ ဘရိုကိုလီ၊ ဂျေါဖီပနျးပှငျ့၊ ဂျေါဖီထုပျ
အရိုးသနျမာဖို့အတှကျ မဂ်ဂနီဆီယမျနှငျ့ ကယျလျစီယမျ
နို့၊ ခြိဈ၊ ပဲအမြိုးမြိုး၊ ထောပတျသီး၊ ငှကျပြောသီး၊ ရကျဈဘယျရီသီး
အဆုတျလုပျငနျးဆောငျတာ ကနျြးမာစဖေို့အတှကျ ဆယျလီနီယမျ
ဘရာဇီးအခှံမာသီး၊ ကွကျဥမြား၊ ဆနျလုံးညို တို့ဖွဈပါတယျ။
ကလေးမှေးဖှားပွီးနောကျမှာ ကိုယျ့ကိုယျကို စနဈတကြ ဂရုစိုကျဖို့က အရမျးအရေးကွီးပါတယျ။ ကလေးကို မိခငျနို့ကတဆငျ့ အာဟာရတှေ အကြိုးသကျရောကျစမေယျ့ အစားအစာမြားကို စားရပါလိမျ့မယျ။
ရောငျရမျးခွငျးကို လြော့ခပြေးဖို့ ကွေးနီဓါတျ
နှမျးစေ့၊ almondsသီး၊ သီဟိုဋျစေ့ တို့စားပေးရပါမယျ။
ကလေးရဲ့ မကျြလုံးဖှံ့ဖွိုးတိုးတတျစဖေို့ Beta-carotene
ကလေးရဲ့ မကျြလုံးတှဟော မှေးပွီး ၆လမှစပွီး ဖှံ့ဖွိုးလာပါတယျ။ Beta-carotene ကွှယျဝတဲ့ အစားအစာမြား စားသုံးခွငျးက ကလေးကို မိခငျနို့ကတဆငျ့ ၎င်းငျးရဲ့ အကြိုးကြေးဇူးမြားကို ပေးစှမျးနိုငျပါတယျ။ မုနျလာဥနီ၊ ကနျစှမျးဥတို့စားပေးရပါမယျ။
ကယျလိုရီမွငျ့မားတဲ့ အစားအစာမြားကလညျး အရေးကွီးပါတယျ။ အမြိုးသမီးတဈယောကျဟာ ကလေးနို့တိုကျနတေဲ့ ပထမလအနညျးငယျအတှငျးမှာ တဈနကေို့ ကယျလိုရီအပို ၃၀၀ခနျ့ လိုအပျပါတယျ။
ကျန်းမာသော ကလေးတစ်ယောက်ကို မွေးဖွားဖို့ တစ်ပတ်နဲ့ တစ်ပတ် ဘယ်အစားအစာတွေ စားဖို့လိုအပ်သလဲ?
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေဟာ မိခင်နှင့်သန္ဓေသားကျန်းမာဖို့အတွက် အစားအစာ စားသုံးရာမှာ ရွေးချယ်မှုမှန်ကန်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အတွင်းမှာ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေက ပြောင်းလဲနေတာကြောင့် ပရိုတိန်း၊ ဗီတာမင်နှင့် သတ္တုဓါတ်တွေ အပိုဆောင်း ရရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ မမွေးသေးတဲ့ ကလေးနှင့် မိခင်ရဲ့ ကယ်လိုရီလိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းဖို့ ကိုယ်ဝန်ဆောင် ဒုတိယနှင့် တတိယသုံးလတာ ကာလအတွင်းမှာ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း အပိုဆောင်းကယ်လိုရီ ၃၀၀-၅၀၀လောက် ခန္ဓာကိုယ်က လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ကလေးမွေးပြီးနောက်နှင့် ကလေးကို နို့တိုက်နေတဲ့ ပထမလအနည်းငယ်အတွင်းမှာ နေ့စဉ် တူညီတဲ့ ကယ်လိုရီအပို ပမာဏကို ရရှိဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
ဒါ့ကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မေမေတို့အတွက် ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်မှာ လိုအပ်တဲ့ အာဟာရများစွာနှင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေ ပုံမှန်ရက်သတ္တပတ်အတွင်းမှာ စားသင့်တဲ့ အစားအစာ စရင်းကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရဲ့ အစောပိုင်းရက်သတ္တပတ်(၂ပတ်-၃ပတ်)အတွင်းမှာ စားသုံးတဲ့ အစားအစာများက သင်နှင့်သင့်ကလေးအတွက် သီးသန့်အာဟာရ အဖြစ် ဆောင်ရွက်ပေးပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့ကြောင့် လိုအပ်တဲ့ အာဟာရ အားလုံးကို စားသုံးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဖောလစ်အက်ဆစ်ကြွယ်ဝတဲ့ အစားအစာများက ကလေးရဲ့ အစောပိုင်းကျောရိုးဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် ကူညီပေးတာကြောင့် ဒီအဆင့်မှာ စားသုံးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မဂ္ဂနီဆီယမ်ကြွယ်ဝတဲ့ အစိမ်းရောင် အရွက်များကို စားခြင်းက ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် ပျို့အန်တတ်တာကို သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။
အစိမ်းရောင် အရွက်များ၊ ဘရိုကိုလီ၊ ကြက်ဥ၊ ပဲအမျိုးမျိုး။
၂။ ကိုယ်ဝန် ၄ပတ်မှ ၁၂ပတ်
ကိုယ်ဝန်ဆောင် ၆ပတ် ဝန်းကျင်လောက်မှာ ကလေးရဲ့ သွေးနီဆဲလ်များက စတင်ဖွဲ့စည်းလာပြီး နှလုံးသွေးလည်ပတ်မှု စတင်ပါတယ်။ ဒီအဆင့်မှာ ဖြစ်စဉ်ကို ကူညီပေးဖို့ သံဓါတ်ကြွယ်ဝတဲ့ အစားအစာများကို စားသုံးသင့်ပါတယ်။ non-vegetarian အစားအစာများမှာ တွေ့ရတဲ့ သံဓါတ်ကို ခန္ဓာကိုယ်က ပိုမိုလွယ်ကူစွာ စုပ်ယူပေမယ့် သင်ဟာ သက်သက်လွတ်စားသူဖြစ်လျှင် ဗီတာမင်စီကြွယ်ဝတဲ့ လိမ္မော်ဖျော်ရည်ကဲ့သို့ အသီးဖျော်ရည်သောက်ခြင်းဖြင့် သံဓါတ်စုပ်ယူခြင်းရဲ့ ဖြစ်စဉ်ကို အရှိန်မြှင့်နိုင်ပါတယ်။
နွားနို့၊ ကြက်ဥ၊ အသား၊ ပင်လယ်စာ
ပထမသုံးလတာပြီးသွားရင် ကလေးရဲ့ ဦးနှောက်ဟာ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ တခြားအစိတ်အပိုင်းများထက် ပိုပြီးမြန်မြန် စတင်ဖွံ့ဖြိုးပါတယ်။ ဒီအဆင့်မှာ အိုမီဂါ ၃ဖက်တီးအက်ဆစ်နှင့် DHA ကြွယ်ဝတဲ့ အစားအစာမျာကို စားသုံးပေးခြင်းဖြင့် လိုအပ်တဲ့ အာဟာရများကို ထောက်ပံ့ပေးရပါလိမ့်မယ်။
mackerel (ငါးကွမ်းရှပ်)၊ sardines (ငါးသေတ္တာငါး)၊ DHA သို့ EPA ပါဝင်တဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင် ဗီတာမင် ဖြည့်စွက်စာများ
၃။ ကိုယ်ဝန် ၁၃ပတ်မှ ၂၈ပတ်
ဒါဟာ ကလေးတစ်ယောက်အဖြစ် လျှင်မြန်စွာ ဖွံ့ဖြိုးသော အရေးပါတဲ့ အဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ အာဟာရတွေ များစွာ လိုအပ်ပါတယ်။
မျက်လုံးအတွက် DHA နှင့် ဘီတာကာရိုတိန်း
မုန်လာဥနီ၊ ကန်စွန်းဥ၊ ဟင်းနုနွယ်၊ မက်ကရယ်ငါး၊ ဆာဒင်းငါး
နွားနို့၊ ဒိန်ချဉ်၊ တို့ဖူး၊ ချိစ်၊ ငါးသေတ္တာငါး
ကယ်လ်စီယမ် စုပ်ယူမှုကို ကူညီဖို့ ဗီတာမင်ဒီ
ငါးသေတ္တာငါး၊ ငါးသလောက်၊ fortified milk
DNAရဲ့ လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက် ဇင့်
အနီရောင်အသား၊ shellfish၊ ပဲ၊ အခွံမာသောအသီးများ၊ အစေ့အဆန်များ၊ နို့ထွက်စားသောက်ကုန်များ
၄။ ကိုယ်ဝန် ၂၉ပတ်မှ ၄၀ပတ်
သင့်ကိုယ်ဝန်ရဲ့ နောက်ဆုံးပတ်ကို စတင်ချဉ်းနှင်းဝင်ရောက်လာတာကြောင့် သင့်အစားအသောက်ထဲမှာ ထည့်သွင်းစားသုံးရမယ့် အစားအစာများစွာ ရှိပါတယ်။
သွေးခဲမှုကို ကူညီပေးဖို့ ဗီတာမင် ကေ
ကိုက်လန်၊ ဟင်းနုနွယ်၊ စိမ်းစိမ်းစိုစို ဆလတ်ရွက်များ၊ Swiss chard၊ ဘရိုကိုလီ၊ ဂေါ်ဖီပန်းပွင့်၊ ဂေါ်ဖီထုပ်
အရိုးသန်မာဖို့အတွက် မဂ္ဂနီဆီယမ်နှင့် ကယ်လ်စီယမ်
နို့၊ ချိစ်၊ ပဲအမျိုးမျိုး၊ ထောပတ်သီး၊ ငှက်ပျောသီး၊ ရက်စ်ဘယ်ရီသီး
အဆုတ်လုပ်ငန်းဆောင်တာ ကျန်းမာစေဖို့အတွက် ဆယ်လီနီယမ်
ဘရာဇီးအခွံမာသီး၊ ကြက်ဥများ၊ ဆန်လုံးညို တို့ဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးမွေးဖွားပြီးနောက်မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို စနစ်တကျ ဂရုစိုက်ဖို့က အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ ကလေးကို မိခင်နို့ကတဆင့် အာဟာရတွေ အကျိုးသက်ရောက်စေမယ့် အစားအစာများကို စားရပါလိမ့်မယ်။
ရောင်ရမ်းခြင်းကို လျော့ချပေးဖို့ ကြေးနီဓါတ်
နှမ်းစေ့၊ almondsသီး၊ သီဟိုဋ်စေ့ တို့စားပေးရပါမယ်။
ကလေးရဲ့ မျက်လုံးဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်စေဖို့ Beta-carotene
ကလေးရဲ့ မျက်လုံးတွေဟာ မွေးပြီး ၆လမှစပြီး ဖွံ့ဖြိုးလာပါတယ်။ Beta-carotene ကြွယ်ဝတဲ့ အစားအစာများ စားသုံးခြင်းက ကလေးကို မိခင်နို့ကတဆင့် ၎င်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးများကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။ မုန်လာဥနီ၊ ကန်စွမ်းဥတို့စားပေးရပါမယ်။
ကယ်လိုရီမြင့်မားတဲ့ အစားအစာများကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ ကလေးနို့တိုက်နေတဲ့ ပထမလအနည်းငယ်အတွင်းမှာ တစ်နေ့ကို ကယ်လိုရီအပို ၃၀၀ခန့် လိုအပ်ပါတယ်။
Next articleမီးဖှားတော့မယျ့ အစောပိုငျး လက်ခဏာတှကေို ဘယျလိုသိနိုငျမလဲ?